Magweta Ari Kumirira Nhengo dzeMDC dziri Muhusungwa Anokwidza Nyaya iyi kuDare rePamusoro
Chikumi 02, 2011
Magweta ari kumirira nhengo dzeMDC-T dzakasungwa zvichitevera kupondwa kwemumwe mupurisa mumusha weGlen View nemusi weSvondo, akwidza nyaya yavo kudare repamusoro achikumbira dare iri kuti rimanikidze mapurisa kuendesa nechimbichimbi vasungwa ava kumatare kana kuti vaburitswe muhusungwa.
Mapurisa akanga achiramba kuti haana vanhu vaakasunga zvichitevera kupondwa kwaInspector Petros Mutedza, asi magweta aya ati mushure mekusvitsa mapurisa magwaro ekudare aya, mapurisa azovabvumidza kuona vasungwa ava.
Vamwe vevasungwa ava, avo vanosanganisira VaLast Maengahama, vanonzi vakashungurudzwa zvikuru vari muhusungwa.
Bato reMDC ratiwo pari zvino rakwanisa kuziva nhengo dzaro dzinosvika makumi maviri neshanu dzakasungwa. Bato iri rati huwandu uhu huri kuramba huchikwira sezvo mapurisa ari kuramba achisunga vamwe vanhu.
Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava, VaMarufu Mandevere, vaudza Studio 7 kuti vakwanisa kusangana nevasungwa gumi nevashanu uye vose vati vakashungurudzwa, zvikuru pavaisungwa.
VaMandevere vati vasungwa ava vari kuda kupomerwa mhosva yekuponda mupurisa uyu.
Zvichakadaro, imwe mhuri yemuGlen View yati yatiza musha wayo zvichitevera kuvingwa kwayakaitwa nemapurisa mushure mekuita mafaro ekupemberera kuberekwa kwemwana mumhuri iyi.
Vataura vakamirira mhuri iyi vaudza Studio 7 kuti vari kutsvagwa nemapurisa kunyange hazvo vakanga vapiwa mvumo yekuenderera mberi nemafaro aya nemapurisa epaSoutherton. Vatiwo vari kunzwa kite pane mumwe mupurisa akapakata akavagarira pamba pavo, uyo ari kutoigirwa chikafu nevamwe vake.
Ukuwo, bepanhau reThe Herald rati rimwe remakurukota ezvemukati menyika, VaKembo Mohadi, vakati mapurisa achange achienda kumisangano yezvematongerwo enyika, zvikuru inenge isina kupihwa mvumo nemapurisa, achange akapakata zvombo kuitira kuzvidzivirira.
Bepanhau iri rati VaMohadi vakataura mashoko aya zvichitevera kupondwa kwaInspector Mutedza kuGlen View mukupera kwesvondo, izvo zvakaita kuti vatsigiri veMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai vakawanda vasungwe.
Studio 7 haina kukwanisa kubata VaMohadi pamusoro pemashoko avanonzi vakataura aya.
Asi rimwe remakurukota ezvemukati menyika, Amai Theresa Makone, vati havana ruzivo nezvedanho rinonzi rakataurwa naVaMohadi iri.
Amai makone vaudzawo Studio 7 kuti semaziviro avo, mapurisa achangoramba achishanda sezvaanga achiita kare, vakatiwo vane hurombo zvikuru nekurasikirwa nehupenyu kwakaitwa neimwe nhengo yebazi ravo.
Hurukuro naVaMarufu Mandevere
Hurukuro neMumwe weMhuri Yakatiza Musha